जीवनकै अन्तिम बन्यो यो सेल्फी, लगत्तै गयो ४ जनाको ज्यान ! - KlipMandu
जीवनकै अन्तिम बन्यो यो सेल्फी, लगत्तै गयो ४ जनाको ज्यान !
खुसीसाथ सेल्फी लिइरहेका यी युवाहरुलाई सेल्फी लिने बेलासम्म थाहा थिएन यो उनीहरुको जीवनकै अन्तिम सेल्फी बन्नेछ । तर, सेल्फी लिएलगत्तै यीमध्ये चार जनाको ज्यान गएको छ । बसको छतमा बसेर सेल्फी लिइरहेका यी यात्रुमध्ये ४ जनाको बस दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको हो ।
यो सेल्फी लिएको झण्डै ८ मिनेटपछि दुर्घटना भएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतको हरियाणाको यमुनानगरमा भइरहेको कपालमोचन मेलाको अन्तिम दिन दर्शन गरेर फर्किएका श्रद्धालुहहरु चढेको ब दुर्घटना भएको हो ।
बसमा २८ यात्रु थिए । तीमध्ये ११ जना छतमा सवार रहेको बताइएको छ । फर्कंदै गर्दा छतमा रहेका चरणजीत सिंह नामका यात्रुले यो सेल्फी लिएका थिए । दुर्घटनामा २० यात्रु घाइते भएको बताइएको छ ।
← बाटोमा एक अधबैसे जापानी महिला र उनकी Teenager छोरी फोहोर टिप्दै
निर्वाचन सुरक्षा : सबै स्थानमा पुग्यो सेना →
तीन कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत